Bụ 3D ebipụta mkpụrụ obi? Were ị mara ihe ndị kasị sie 3D ebi akwụkwọ ihe - China Cixi Lanbo Obibi
Bụ 3D ebipụta mkpụrụ obi? Were ị mara ihe ndị kasị sie 3D ebi akwụkwọ ihe
Ọtụtụ ndị na ntị ka 3D obibi, nke mbụ niile, dọọrọ mmasị mara mma obere ihe e biri ebi site 3D. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị enyi ga na-eche banyere arụmọrụ nke dị iche iche ụdị nke 3D na-ebi akwụkwọ, na 3D-ebi akwụkwọ ihe e leghaara anya ọtụtụ mgbe. N'eziokwu, 3D ebi akwụkwọ ihe nwere ike kwuru na-abụ ihe dị mkpa ihe onwunwe ndabere maka mmepe nke 3D-ebi akwụkwọ technology. Mmepe nke ihe n'ụzọ dị ukwuu na-ekpebi ma 3D-ebi akwụkwọ nwere ike ji mee ihe ọtụtụ ebe.
Ugbu a, 3D ebi akwụkwọ ihe tumadi na-agụnye polima ihe, metal ihe, powder ihe, seramiiki ihe na ọtụtụ ndị mejupụtara ihe.
Polymer ihe tumadi na-agụnye engineering plastik, bio-plastik, thermosetting plastik, photosensitive resins, wdg, na arụmọrụ nke dị iche iche nke ihe dị nnọọ iche.
Engineering plastic na-ezo aka na ulo oru plastic eji dị ka ulo oru akụkụ ma ọ bụ elu casing ihe. Ọ bụ a plastic na magburu onwe ike, mmetụta ndị na-eguzogide, okpomọkụ na-eguzogide, ekweghị ekwe na merela agadi na-eguzogide. Ọ bụ ụdị nke 3D ebi akwụkwọ ihe onwunwe na a dịgasị iche iche nke ngwa; bioplastics Ọ tumadi nwere PLA, PETG, PHB, wdg, na nwere ezigbo biodegradability; thermosetting resin elu ike na ọkụ na-eguzogide, na dị nnọọ adabara powder laser sintering akpụ usoro eji 3D-ebi akwụkwọ; photosensitive resin nwere ngwa ngwa ime ọsọ, table Ezigbo akọrọ arụmọrụ, ezigbo ọdịdị mgbe ịkpụzi, bụ oke nke ọtụtụ elu-nkenke ngwaahịa-ebi akwụkwọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ugbu a 3D ebi akwụkwọ ihe ndị plastik, ezi n'ibu ike na ọkụ conductivity nke metal mere eme nnyocha nnọọ mmasị na-ebi akwụkwọ nke metal ihe. The isi metal ihe gụnyere ferrous ọla gụnyere igwe anaghị agba nchara na superalloys, na ndị na-abụghị ferrous ọla dị ka titanium, magnesium alloy, na gallium.
ntụ ntụ ihe
Ọ bụ ma a plastic ihe onwunwe ma ọ bụ a metal ihe onwunwe, ma na ya magburu onwe ime mgbanwe iji kwekọọ 3D-ebi akwụkwọ technology, powder ihe ndị ka na-ezi nhọrọ maka 3D-ebi akwụkwọ. 3D-ebi akwụkwọ na-achọ elu powder ihe, na ịkpụzi powder a chọrọ ka nwere ezi ihe onwunwe formability, elu ịkpụzi ike, obere ntụ ntụ urughuru size, ihe isi ike na agglomeration, ezi Rolling onwunwe, adabara njupụta na porosity, na ngwa ngwa ihicha na hardening. The mbụ onwe-emepụta sprinkler ájá ụdị 3D ngwa nbipute mepụtara BỤP Technology Co., Ltd. eji quartz ájá na ntụ ntụ ihe.
Aluminosilicate seramiiki powder ike ga-eji na 3D biri ebi seramiiki ngwaahịa. The 3D biri ebi seramiiki ngwaahịa bụ impervious ka mmiri, okpomọkụ (ruo 600 ° C), recyclable, na-abụghị na-egbu egbu, ma ike ya abụghị elu, ọ ga-eji dị ka onye na mma cookware, tableware (iko, ọkwá, efere, egg iko na coasters)) na n'ụlọ mma ihe ndị dị ka idọba-oriọna, taịl nile, ite, na artworks.
Obi abụọ adịghị ya, dị ka ihe ndabere nke 3D obibi, 3D ebi akwụkwọ ihe ga-aghọ ihe dị mkpa ahịa maka ọdịnihu 3D-ebi akwụkwọ. More na ndị ọzọ ihe magburu onwe arụmọrụ ga-mepụtara na-akwalite mmepe nke 3D-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ. Ke adianade do, ke adianade 3D ebi akwụkwọ ihe, ịmụta isi technology ma isi mmiri nke 3D ebi akwụkwọ bụkwa otu ihe dị mkpa itunanya na mmepe nke anụ ụlọ 3D-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ. The oké ifufe usoro 3D ngwa nbipute ulo oru site BỤP bụ nke mbụ inkjet printhead mepụtara na China. (3D ebi akwụkwọ isi mmiri) bụ ihe dị ịrịba ama, na m nwere olileanya na ihe ụlọ ọrụ na China nwere ike itinye ego ndị ọzọ ume na-emepe emepe 3D ebi akwụkwọ isi technology kama ịdabere kpamkpam na ndị mba ọzọ technology.